कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा कम मेमोरियल लाइब्रेरी
कोलम्बियामा कम मेमोरियल लाइब्रेरी। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
माथिल्लो मैनहट्टनको Morningside हेइट्स पावरमा स्थित, कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित आइवी लीगको आठ सदस्य हो, र यो देशको सबैभन्दा छनौट महाविद्यालय मध्ये एक हो। 1754 मा स्थापित, कोलम्बिया न्यूयर्क राज्यमा सबैभन्दा पुरानो कलेज हो। विश्वविद्यालय 1897 मा यसको हालको स्थानमा सारियो, र केहि विश्वविद्यालयको हालको इमारत इटालियन पुनर्जागरण शैलीमा प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म McKim, Mead, र White द्वारा डिजाइन गरिएको थियो।
जब दर्शकहरूले पहिला क्याम्पसमा खुट्टा राख्छन्, उनीहरूलाई कम लाइब्रेरीको ठूलो डोमले मारेका छन्, रोममा प्यान्टोन पछि ढाडिएको ढाँचा। इमारतको प्रभावशाली घुमाउरो टुङ्गो मूलतः विश्वविद्यालयको मुख्य पढाइ कोठाको रूपमा सेवा गर्थे, र आज यो कार्यक्रम र प्रदर्शनका लागि प्रयोग गरिन्छ। 1930 मा, बटलर ले कोलम्बिया को मुख्य पुस्तकालय को रूप मा बदले, र अब कम लाइब्रेरी मा मुख्य प्रशासनिक कार्यालयहरु मा राष्ट्रपति र प्रोोस्ट समेत शामिल छ। इमारत ग्रेजुएट स्कूल अफ आर्ट्स एन्ड साइंसको पनि घर हो।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा कम प्लाजा
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा कम प्लाजा। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कम लाइब्रेरीको अगाडिल्लो ढोका बाहिर कम प्लाजा, कोलम्बिया विश्वविद्यालयको केन्द्रीय बाहिरी ठाउँ हो। प्रभावशाली इमारतहरूले सबै पक्षमा घेरिएको, प्लाजाले कक्षाहरू र निवासको ह्यान्डमा सुरू गर्ने विद्यार्थीहरूको साथमा, र राम्रो मौसममा, अध्ययन र सामाजिककरणको लागि मनपर्ने ठाउँ हो। कम प्लाजामा धेरै विशेष घटनाहरू पनि छन्, र यो ठाउँ एक कन्सर्ट, मेला, वा नाटकीय उत्पादनको लागि प्रयोग हुने ठाउँ पत्ता लगाउन असामान्य छैन।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अर्ल हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अर्ल हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको धेरै प्रतिष्ठित इमारतहरूमध्ये एक, अर्ल हॉलले 1 992मा 1952 मा आफ्नो ढोका खोलिदिए। भवन सामुदायिक दिमागका विद्यार्थीहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो जसले अरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छ। गैर-लाभकारी संगठन सामुदायिक प्रभाव यहाँ मुख्यालय छ, र प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 कोलम्बिया विद्यार्थीहरूले भोजन, कपडा, आश्रय, शिक्षा, र कामको प्रशिक्षण प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउनका लागि प्रत्येक वरपरका आसपासका आवश्यक्ताहरुको लागि।
अर्ल हॉल विश्वविद्यालय चापालेन र युनाइटेड क्याम्पस मन्त्रालयका लागि पनि घर हो। कोलम्बियासँग विभिन्न देश र विश्वका विभिन्न जनसंख्याको जनसंख्या छ, र संयुक्त क्याम्पस विभागहरूले यो विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। संगठनले पादरीहरू र धार्मिक पृष्ठभूमिको व्यापक दायराबाट व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्दछ, र समूह कोलम्बिया समुदायको लागि परामर्श, आउटसोच, शैक्षिक गतिविधि र धार्मिक समारोहहरू प्रदान गर्दछ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा लुईसोन हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा लुईसोन हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
वयस्क र गैर-परम्परागत विद्यार्थीहरू चाँडै लुईसन हॉल, कोलम्बियाका सामान्य अध्ययन स्कूलका लागि स्नातक डिग्री विद्यार्थीहरूका लागि चाँडै परिचित हुनेछन्, र निरन्तर शिक्षा स्कूल र मास्टर डिग्री डिग्रीका लागि सामान्य अध्ययन।
सामान्य अध्ययनको स्कूलमा लगभग 1500 विद्यार्थीहरू छन् जुन तेस्रो भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अंशकालिक हुन्छन्। जी एस विद्यार्थीहरूको औसत उमेर29 हो। जीएस स्नातकहरूले समान पाठ्यक्रमहरूलाई पारंपरिक कोलम्बिया स्नातकका रूपमा प्रयोग गर्छन्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा बटलर लाइब्रेरी
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा बटलर लाइब्रेरी। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
निम्न लाइब्रेरीबाट कम प्लाजाको विपरीत अन्तमा बटलर लाइब्रेरी, कोलम्बिया विश्वविद्यालयको प्राथमिक स्नातक पुस्तकालय हो। कोलम्बिया लाइब्रेरी प्रणालीले दस लाख भन्दा अधिक मात्रामा घर बनाउँछ र सदस्यता लिन्छ 140,000 धारावाहिक। बटलर स्थित दुर्लभ पुस्तक र पांडुलिपि लाइब्रेरी 750,000 दुर्लभ पुस्तकहरू र 28 लाख पाण्डुलिपिहरू छन्। जब पुस्तकालयले कलेजलाई रोज्दा पुस्तकालयको प्रायः सूचीमा उच्च हुँदैन, सम्भवतः कोलम्बियाका विद्यार्थीहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि उनीहरूले देशको सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान पुस्तकालयहरूमा पहुँच पाउनेछन्।
यसको कम्प्यूटर प्रयोगशाला र धेरै अध्ययन कोठा र क्यारियर संग, बटलर होमवर्क गर्न को लागी उत्कृष्ट स्थान हो र परीक्षाको लागि तयारी गर्दछ। लाइब्रेरी दिनभरि 24 सेकेन्ड खुल्ला हुन्छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा उर हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा उर हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
ठीक दायाँ लाइब्रेरी पछि तपाईले उरिस हल, घर कोलम्बिया बिजनेस स्कूलमा भेट्टाउनुहुनेछ। प्रभावकारी कंक्रीट संरचना विद्यालयको शक्तिको लागि फिटिंग म्याच हो। कोलम्बियाका एमबीए कार्यक्रमहरू प्रायः राष्ट्रको शीर्ष 10 बीचमा रिक्सा गर्छन् र विद्यालयले 1,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई स्नातक गर्दछ। बिजनेस स्कूल कोलम्बिया को स्नातक अध्ययन को धेरै स्कूलहरु को सबै भन्दा ठूलो विद्यालय हो।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक कार्यक्रमहरू छैनन्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा हैस्यर हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा हैस्यर हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्राकृतिक विज्ञानमा बलियो कार्यक्रमहरू छन्, र हैमेयर हॉलले रसायन विज्ञान विभागको घर हो। धेरै नोबेल पुरस्कार विजेताहरूले यस ऐतिहासिक इमारतको हॉलहरू भोगेका छन्, र यसको 40-चरणमा निरन्तर छत संग हैमियरको मुख्य व्याख्यान कक्षले प्रभावित गर्न गाह्रो छ।
कोलम्बिया स्नातक रसायन विज्ञान स्नातक भन्दा अधिक स्नातक छ, ​​तर क्षेत्र बढाने अंतःविषय बनेको छ। रसायन चिकित्सा संकाय जैव रसायन, पर्यावरण रसायन विज्ञान र रासायनिक भौतिकी सहित धेरै अन्य प्रमुखहरुको समर्थन गर्दछ। विद्यार्थी जो रसायन विज्ञान मा पूर्ण प्रमुख लागन चाहान गर्न को रसायन मा एक कम मांग एकाग्रता पूरा गर्न सक्छ कि अर्को क्षेत्र मा एक प्रमुख पूरक हुनेछ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा डाज फिजिकल फिटनेस सेन्टर
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा डाज फिजिकल फिटनेस सेन्टर। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
खेलकुद र शारीरिक फिटनेस हुँदा शहरी परिसरहरू एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्छ। दुर्भाग्यवश शहरी विश्वविद्यालयहरूमा विशाल खेल परिसरहरू र फिटनेस सेन्टरका प्रकारहरू निर्माण गर्न अचल सम्पत्ति छ जहाँ हामी अक्सर प्रायः एकेडेमीसँग परिसरमा देख्छौं।
कोलम्बिया यूनिवर्सिटीको समाधानले आफ्नो एथलेटिक सुविधाहरू भूमिगत रूपमा सार्न थालेको थियो। ह्यामियर हॉलको बगलमा एक रैंप डज शारीरिक फिटनेस सेन्टरमा जान्छ। चकलेट घरहरू तीन स्तरका व्यायाम उपकरणहरू साथै स्विमिंग पूल, इनडोर ट्र्याक, बास्केटबाल अदालत, र स्क्वाश र रकेटबल अदालतहरू छन्।
फुटबल, फुटबल, बेसबल, र अन्य स्पोर्ट्सको लागि थप ठाउँ चाहिन्छ, कोलम्बिया विश्वविद्यालयको बेकर एथेलेटिक कम्प्लेक्स मैनहट्टनको 218 औं स्ट्रीटमा अवस्थित छ। परिसरमा 17,000 सीट स्टेडियम समावेश छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पप्पन हल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पप्पन हल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
तपाईं पिपिन हल पहिचान गर्न कुनै कठिनाई छैन - यो यसको छत मा एक पर्यवेक्षक संग एक मात्र भवन हो। तथापि, सबै उज्यालो प्रदूषण संग, मैनहट्टनले स्टार घिमिरेको लागि राम्रो स्थान होईन, तर पिप्पनमा दुई दूरबीनहरू शिक्षण र सार्वजनिक पहुँचका लागि प्रयोग गरिन्छ।
तथापि, कोलम्बिया स्नातक विद्यार्थीहरूले एरिजोनाको किट पीक मा MDM पर्यवेक्षकमा दुई ठूला टेलिस्कोपहरू पहुँच गरेका छन्। कोलम्बियाको साथ, यस शक्तिशाली पर्यवेक्षकले डार्टमोथ , ओहियो राज्य , मिशिगन विश्वविद्यालय , र ओहियो विश्वविद्यालयका साथ यसको सुविधा साझा गर्दछ।
पिप्पन हॉल कोलम्बियाको भौतिकी र खगोल विज्ञान विभागको घर हो। प्रसिद्धिको मितिको निर्माणको सबैभन्दा ठूलो दावी सन् 193 9मा फिर्ता हुँदा जर्ज पेग्रामले तहखानेमा यूरेनियम एटम विभाजित गर्यो। मैनहट्टन परियोजना र परमाणु बमको विकासले ती प्रयोगहरूबाट वृद्धि गर्यो।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्केपेरो केन्द्र
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्केपेरो केन्द्र। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कोलम्बियाको क्याम्पसको उत्तरी अन्त फ्यु फाउण्डेशन स्कूल अफ ईन्जिनियरिङ् र एप्लाइड साइंसेजको छ। Schapiro केन्द्र तीन भवनहरु मध्ये एक छ जुन स्कूल को प्राथमिक घर को रूप मा कार्य गर्दछ। कोलम्बियाले ईन्जिनियरिङ् प्रदान गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रहरुमा विज्ञान को डिग्री लागू गरे: लागू भौतिकी, गणित, जैव ईन्जिनियरिङ्, रासायनिक ईन्जिनियरिङ्, सिविल ईन्जिनियरिङ्, कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ्, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्, पृथ्वी र पर्यावरण ईन्जिनियरिङ्, वित्तीय ईन्जिनियरिङ्, औद्योगिक ईन्जिनियरिङ्, सामाग्री विज्ञान, र लागू मेनेनिकल इन्जिनियरिङ र अपरेसन रिसर्च।
स्नातकहरू बीच, अपरेसन रिसर्च, बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ्, सिविल ईन्जिनियरिङ् र मेकेनिकल इन्जिनियरिङ सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। 2010 मा, कोलम्बियाले 333 स्नातक डिग्री ईन्जिनियरिङ्मा 558 डिग्री डिग्री दिए। र 84 डक्टल डिग्री।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्मिमरहार्न हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्मिमरहार्न हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
भर्खरै स्कूल ईन्जिनियरिङ् को दक्षिण तपाईं Schermerhorn हॉल, 1890 मा फिर्ता मिति को धेरै भवनहरु मध्ये एक भेट्टाउनुहुनेछ। इमारत मूलतः प्राकृतिक विज्ञान हो, तर आज यो अफ़्रीकी अमेरिकी अध्ययन, कला इतिहास र पुरातत्व, भूविज्ञान, मनोविज्ञान र महिला अध्ययन सहित कार्यक्रमहरूको व्यापक वर्गीकरणको लागि घर हो।
इमारतले वाल्च फाइन आर्ट्स सेन्टर तथा पर्यावरण अनुसन्धान र संरक्षण केन्द्रको पनि घर छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा एवरी हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा एवरी हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
एवरी हॉल मार्निंग्साइड हाइट्स परिसरको शुरुआती दिनमा McKim, Mead and White द्वारा डिजाइन गरिएको इटाली रेनासेन्स स्टाइल इमारतों मध्ये एक हो। भवन कोलम्बियाको प्रतिष्ठित स्नातक विद्यालय वास्तुकला, योजना, र संरक्षणको लागि हो। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमबाट सयौं मास्टर विद्यार्थीहरू स्नातक हुन्छन्।
कोलम्बियाको लाइब्रेरी प्रणालीमा 22 वटा पुस्तकालयहरूमध्ये एक पनि एवरी पनि घर हो। एवरी आर्किटेक्चरल र फाइन आर्ट्स लाइब्रेरीमा आर्किटेक्चर, कला, पुरातत्व, ऐतिहासिक संरक्षण, र शहर नियोजन संग सम्बन्धित व्यापक धारणाहरू छन्। पुस्तकालयमा लगभग आधा मिलियन संस्करण, 1,000 आवधिक र लगभग 1.5 मिलियन चित्र र मौलिक रेकर्डहरू छन्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालय मा सेन्ट पॉल को चैपल
कोलम्बिया विश्वविद्यालय मा सेन्ट पॉल को चैपल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
सेन्ट पावलको चैपल कोलंबिया विश्वविद्यालयको गैर-गैरकानूनी चर्च हो जहाँ नियमित सेवाहरू विभिन्न विश्वासका विद्यार्थीहरूको लागि नियमित रूपमा प्रस्तावित गरिन्छ। भवन चयन लेक्चर र कन्सर्टका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
1949मा निर्मित, इमारतको आर्किटेक्चर यसको संगमरमर फर्श, दाँत गिलास विन्डो र डोल्ड टाइल छत संग सुन्दर छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा ग्रीन हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा ग्रीन हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
जेरोम एल। ग्रीन हॉल कोलम्बिया विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठित कानून विद्यालयको मुख्य भवन हो। यो लागू भइरहेको भवन एम्स्टर्डम एवेन्यू मा पश्चिम 116 औं स्ट्रीट को कोने मा बस्छ। मुख्य स्नातक परिसरमा ग्रीन हल जोड्दै चार्ल्स एच। रिसन प्लाजा, एम्स्टर्डम एवेन्यू भन्दा माथि सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र हो।
ग्रेन हॉलको पहिलो तल्ला कानून स्कूल को लागि धेरै कोर क्लासरूम को घर हो। भवन भवनको दोस्रो, तेस्रो र चौथो फ्लोर डायमण्ड ल्ये लाइब्रेरी र लगभग 400,000 शीर्षकको यसको संग्रह।
कोलम्बिया लॉन स्कूल लगातार देश मा धेरै माथि कानून स्कूलहरु को बीच मा छ। प्रवेश अत्यन्त चुनिंदा छ। 2010 मा, 430 विद्यार्थीले कोलम्बियाबाट कानुनी डिग्रीको डट कम गरे।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अल्फ्रेड लेर्नर हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा अल्फ्रेड लेर्नर हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
मुख्य अकादमिक क्वाड्रनल को दक्षिणपूर्वी कोने मा कोलम्बिया विश्वविद्यालय को हलचल छात्र केन्द्र अल्फ्रेड लेर्नर हॉल मा स्थित छ। गिलास मुखौटा र आधुनिक डिजाइन अन्य आसपासको भवनहरु को क्लासिकल डिजाइन को विपरीत मा उभिएको छ। निर्माण को निर्माण 1 999 मा कुल $ 85 मिलियन को लागी पूरा भएको थियो।
भवन सुविधाहरू कोलम्बियाको विद्यार्थी जीवनको हृदयमा छन्। अल्फ्रेड लिडरर हॉलमा दुई भोजन क्षेत्रहरू, प्रदर्शनी अन्तरिक्ष, बैठक कोठा, एक पार्टी अन्तरिक्ष, हजारौँ विद्यार्थी मेलबक्सहरू, दुई कम्प्युटर कोठाहरू (24-घन्टा पहुँचको साथ), खेल कोठा, एक थियेटर, सिनेमा, र ठूलो सभागृह समावेश गर्दछ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा हैमिल्टन हल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा हैमिल्टन हल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
1907 मा पूरा भएको, हिलमिल्टन हॉल कोलम्बियाको ऐतिहासिक इमारतहरूको अर्को हो जुन अत्यधिक म्याककिम, मेड र व्हाइट वास्तुशिल्प फर्मद्वारा डिजाइन गरियो। इमारतले कोलम्बिया कलेज, विश्वविद्यालयको मुख्य स्नातक कलेजको घरको रूपमा सेवा गर्दछ। कलेजले यसको लामो समय सम्मको अनन्त विकसित कोर पाठ्यक्रममा गर्व गर्दछ जसले शुरुमा विद्यार्थीहरू साना सेमिनारहरूमा ठूला प्रश्नहरूको साथ लाग्दछन्। कोर पाठ्यक्रमले छह आवश्यक पाठ्यक्रमहरू: समकालीन सभ्यता, साहित्य मानविकी, विश्वविद्यालय लेखन, कला मानविकी, संगीत मानविकी र विज्ञान विज्ञानहरूको माध्यमबाट सबै कलेजको विद्यार्थीहरूको लागि एक साझेदारी बौद्धिक अनुभव सिर्जना गर्दछ। तपाईं कोलम्बियाको कोर पाठ्यक्रमको होमपेजमा कार्यक्रमको बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि कोलम्बिया विश्वविद्यालय एक दृढ शहरी वातावरणमा एक ठूलो अनुसन्धान संस्थान हो, विद्यालयले साना वर्गका प्रकारहरू र संकायका साथ नजिकका अन्तरक्रियाहरूलाई जुन उदारवादी कला कलेजमा अधिक सामान्य बनाएको छ। कोलम्बिया कलेजले7देखि 1 विद्यार्थी / संकाय अनुपात (भौतिक विज्ञानमा3देखि 1), र चार वर्षमा लगभग90 विद्यार्थीहरू स्नातक गर्न प्रभावशाली छ। कोलम्बियाको वेबसाइटमा "कलेजको बारेमा" पृष्ठमा अधिक जान्नुहोस्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कोलम्बिया विश्वविद्यालय देशमा पत्रकारिताको सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक विद्यालयहरूको घर हो, र आईआईवी लीगमा मात्र पत्रकारिता विद्यालय हो। विद्यालयले धेरै सय विद्यार्थी विद्यार्थीहरूलाई एक वर्ष र केहि पीएचडी विद्यार्थीहरूलाई स्नातक गर्दछ। 10 महिनाको विज्ञान विज्ञान (एमएस) कार्यक्रम विशेषज्ञताको चार क्षेत्र प्रदान गर्दछ: अखबार, पत्रिका, प्रसारण, र डिजिटल मिडिया। कला (एमए) कार्यक्रमको 9-माह मास्टर, अनुभवकारी पत्रकारहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ जसले आफ्नो कौशललाई हान्न र विकास गर्न, राजनीति, स्वास्थ्य र वातावरण, व्यापार र अर्थशास्त्र र कलामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
कोलम्बिया जर्नलिज्म स्कूलले प्रसिद्धिको धेरै दावी गरेका छन्। जर्नलिज्ज हॉलको निर्माण यूसुफ पल्लिट्ट्जरको रूपमा बजाइएको थियो, र प्रसिद्ध पलिट्टर पुरस्कार र डुपन्ट अवार्डले स्कूलद्वारा प्रबन्ध गरेका छन्। विद्यालय कोलम्बिया पत्रकारिता समीक्षाको लागि पनि घर हो
प्रवेश चयन छ। 2011 अकादमिक वर्षको लागि, एमएस विद्यार्थीहरूको 47%, एमए विद्यार्थीहरूको 32%, र पीडीए विद्यार्थीहरूमध्ये 4% भन्दा बढी भर्ना भएका थिए। र यदि तपाईं भित्र पुग्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले लागत निषेध पाउन सक्नुहुनेछ - ट्यूशन, शुल्क, र लाइभ खर्च $ 70,000 भन्दा धेरै हो।
हार्टले र वाल्च हल्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा
हार्टले र वाल्च हल्स कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
हिलमिल्टन हॉल, हार्टले हॉल र वाल्च हॉलको बगलमा स्थित दाँया कोलम्बियाको स्नातक आवासका हॉलहरू छन्। 2011-2012 अकादमिक वर्षको लागि, स्नातकका लागि कोठा र बोर्डको सामान्य लागत लगभग 11,000 डलर थियो। यो स्पष्ट रूप देखि सस्तो छैन, तर यो एक वास्तविक सम्झौता को प्रतिनिधित्व गर्दछ जब तपाईं मैनहट्टन मा रहन को परिसर को लागत को देखो।
यद्यपि दुई भवनहरू फरक रूपमा कन्फिगर गरिएको छ, हार्टले र वालचको प्रत्येकसँग सूट-शैलीको जीवित छ। प्रत्येक सुइट को यसको भान्सा र एक या दो बाथरूम छ, सूट को आकार को आधार मा। हर्ली र वाल्च हल्सले पहिलो-वर्षका विद्यार्थीहरूको लागि कुनै अन्य विकल्पहरू भन्दा फरक जीवन वातावरण प्रदान गर्दछ - आवास स्थानहरू पहिलो वर्ष र माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरू हुन्, र तिनीहरू लाइभ लर्निंग सेन्टरको एक भाग हुन्। विद्यार्थीहरू आफ्नो आकस्मिक र अतिरिक्त-पाठ्यपुस्तक रुचिहरूलाई तिनीहरूको आवासीय वातावरणमा एकीकृत गर्न। यो भर्चुअल भ्रमणमा वालच एकल-अधिवेशन कोठाहरू जाँच गर्नुहोस्
कोलम्बिया विश्वविद्यालय कोलम्बिया कलेज र स्नातक विद्यालयका स्नातकका लागि चार वर्षको लागि आवासको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। 99% को पहिलो वर्षका छात्र कोलम्बियाको आवास हॉलमा बस्छन्, उच्च स्तरका विद्यार्थीहरूको ठूलो बहुसंख्यक रूपमा।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा जॉन जे हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा जॉन जे हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
Morningside परिसर को मुख्य क्वाड्रनल को दक्षिणपूर्व कोने मा 114 औं स्ट्रीट मा स्थित छ, जॉन जे हॉल पहिलो वर्ष को छात्रहरुको लागि एक ठूलो निवास हॉल हो। इमारतको निचो फर्शले ठूलो डाइनिंग हल, एक सानो सुविधा स्टोर र स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि घर बनाउँछ।
जॉन जे हॉलले प्रायः एकल-अधिवेशन कोठाहरू छन्, र प्रत्येक हलवाले पुरुष र महिलाको बाथरूम साझेदारी गरेको छ। तपाईं यो आभासी भ्रमणमा एक-अधिवेशन कोठा कस्तो देखिन्छ भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ।
भवन निर्माणको नामले न्यूयर्क शहर CYY प्रणालीमा ग्यारह वरिष्ठ महाविद्यालय मध्ये एक जॉन जे कलेजको घर पनि परिचित हुन सक्छ। जय जे कॉलेजले कानून प्रवर्तन र आपराधिक न्यायमा काम गर्न विद्यार्थीहरूको तयारी गर्न देशको शीर्ष मा एक हो। जॉन जे कोलम्बिया स्नातक र उच्चतम न्यायालय को पहिलो मुख्य न्यायाधीश थिए।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा फर्नडल हॉल
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा फर्नडल हॉल। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
फर्नडल हॉल पहिलो वर्ष र सोफोमोर विद्यार्थीहरूको लागि एक आवास हॉल हो। भवनले अर्को विद्यार्थीलाई अल्फ्रेड लेर्नर हॉललाई विश्वविद्यालयको विद्यार्थी केन्द्रमा बस्छ। इमारत मुख्यतः एकल-अधिवेशन कोठा छ, तर एक दुई दर्जन युगल पनि। प्रत्येक फर्शले पुरुष र महिलाको बाथरूम साझेदारी गरेको छ, र तपाइँ प्रत्येक हलवाटमा भान्सा र सानो लाउन्ज पाउनुहुनेछ। यो भवन 1 999 मा पुनःस्थापित गरिएको थियो। यस भर्चुअल भ्रमणमा एक डबल कोठाको जाँच गर्नुहोस्।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको बारेमा बढी जान्न, विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्।
हाइट विन्दु विश्वविद्यालय फोटो टूर
Tchaikovsky "The Nutcracker" मा धेरै भूमिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस्
क्रिस्टोफर कोलम्बसको प्रोफाइल
The Motels of Top Songs
कसरी पसल गर्ने एक नयाँ एटीवी हेलमेट टर्न
विश्वको सबैभन्दा खराब चलन
शीर्ष बच्चाहरु को पुस्तकहरु डायनासोर को बारे मा
Redox समस्याहरूको बारेमा सिक्नुहोस् (अक्सीकरण र घटाइ)
वाशिंगटन, डीसी को सार्वजनिक वास्तुकला
चिनियाँ हितोपदेश - साई वेन्जले आफ्नो घोडा खोल्यो
पुरातत्वविद् कसरी बन्यो
विंटेज, सङ्कलन, प्राचीन र रेट्रो जल स्किस्
अंग्रेजी मा स्वीकार्य र परिशोधन
FAFSA परिवर्तनहरू: तपाईलाई थाहा छ के गर्न आवश्यक छ
जुज 30 को कुरान
ग्रीन-व्हाइट-चेकर गरिएको नियम के हो?
चित्रकारी गर्न ईन्धन रचनात्मकतामा आत्म-लागू गरिएको सीमाहरू
शेक्सपियरको हास्यको बारेमा 'केहि अडको बारेमा'
मास्टर स्थिति के हो?
ईदियम्स र भाव - प्राप्त गर्नुहोस्
10 साहित्य थ्योरी र क्रान्तिवाद शीर्षकहरू
Yom Kippur (वा कुनै) फास्ट को लागि तयारी गर्ने उत्तम तरिका